ဆောင်းဦးရာသီ: ကျွန်တော်နှင့် ရခိုင်ရေး အင်တာဗျူ
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောသင့်အား အေးမြသောလေညှင်းနဲ့ အတူ ဆောင်းဦးရာသီမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။ ¸.•*""*•.¸❤ •❥✿.. ♥*¨*•♫♪ ¨*♥░W░e░l░c░o░m░e░░to░ O░n░l░i░n░e░░ဆောင်း░ဦး░ရာ░သီ░ဂီ░တ░သံ░စဉ်░♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•♫❤¸.•*""*•.¸❤♪♫•*¨*•.¸¸
ဆရာတော်အရှင်မြတ် ဦးဝီရသူ တွေ့လေကြောက်စရာကောင်းလေ မွတ်ဆလင် တရားတော်
ကျွန်တော်နှင့် ရခိုင်ရေး အင်တာဗျူ
မနေ့က ကျွန်တော့ကို voa က မခင်မျိုးသက်က မေးပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ မစ္စတာကင်တိန်းနား နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ရခိုင်လူထုနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တစ်ယောက်အနေနန့်ဘယ်လိုမြင်လဲလို့မေးပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောလိုက်ပါတယ်။ ကင်တိန်းနားရခိုင်ကိုလာတာဟာ ရခိုင်နှင့်ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး၊ ယခုလဲမနေ့က မနက်(၉)နာရီလောက် မှာစစ်တွေကိုရောက်တေ ရောက်တာနှင့် ၀န်ကြီးချုပ်တို့နှင့်တွေ့တယ် ချက်ချင်းဘဲ ဘင်္ဂလီကုလား စခန်းဖြစ်တဲ့ ဘောဒူဘစခန်းနှင့်သဲချောင်းစခန်း ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းသွားတယ်။ ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေ နန့်ပတ်သတ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို မေးမြန်းမူတစ်စုံတရာမရှိဘူး။ အဲဒီစခန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ချက်ချင်းဘဲ ပေါက်တော၊မြေပုံ ဘင်္ဂလီကုလားဒုက္ခသည်တွေဆီကိုဆက်လက်ပြီးထွက်သွားပါတယ် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့အစီအစဉ်မပါလို့သိရပါတယ်။ ကင်တိန်းနားဟာ ယခင်အချိန်တုန်းကလဲဘဲ ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘဲ မူဆလင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို တွေ့ပြီးချက်ချင်းပြန်သွားတာ အကြိမ်တိုင်းပါဘဲလို့၊ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ယခုလို ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက် ကို ရခိုင်ဒေသကို လွှတ်တာဟာ ပတိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ အုပ်စုနှစ်ခုကို ရန်တိုက်ပေးဖို့လွှတ်လိုက်တယ်လို့ဘဲ သုံးသတ်မိပါတယ်လို့၊ မစ္စတာနမ်ဘီးယား ရောက်ခဲ့တုန်း ကဆိုလျင် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကို မျှမျှတတ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးသွားတာကို အကြိမ်တိုင်းလိုလို တွေ့ရပေမဲ့ မစ္စတာကင်တိန်းနားကျတော ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး တတိယအကြိမ် ရခိုင်ပတိပက္ခကို အစပျိုးချင်လို့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမည်ဟု ပြောလိုပါကြောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် ပတိပက္ခဖြစ်မူကဏ္ဍမှာလဲ မစ္စကင်တိန်းနား သည်အဓိကတရားခံတစ်ယောက်အနေနှင့် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားလိုပါကြောင်း သူ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမူကြောင့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားတွင် မကျေနပ်မူများဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့ရသည်ဟု သုံးသပ်လိုပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် မစ္စတာကန်တိန်းနားသည် ယခုအကြိမ်ရခိုင်ပြည်ကိုလာခြင်းသည် တတိယအကြိမ်ရခိုင်ပတိပက္ခကို ဖြစ်အောင်လာရောက် မီးမွှေးခြင်းမျိုးမဖြစ်လိုပါကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုပါကြောင်း ဖြေကြားမူအား voa မှ မခင်မျိုးသက် အနေဖြင့် ပြည့်စုံစွာထုတ် လွှင့်မူမရှိခဲ့မူမရှိပါကြောင်း။
facebook မှကြည့် ချင်ရင် like လုပ်ပါ
ဓညဝတီ ခေတ်(၃)ခေတ်မှ ဘုရင်သုံးဆူအား ရုပ်ထုသွန်းလောင်းရန် ရှင်သီဝလိစီစဉ်
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် အသစ်ထွက်မြန်မာစာကီးဘုတ် "Frozen Keyboard v1.1.3"
Frozen Keyboard Developer Name-သီဟအေးကျော်
မည်သည့် ဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ ကြီးပြင်းကြသည့် မြန်မာအမျိုးမီး စစ်စစ်များသည် ...
မြန်မာမိန်းကလေးများ အတုယူမှားစေမည့် အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ၏ သရုပ်ပျက် ဝတ်စားဆင်ရင်မှုများ
The Voice Weekly ဂျာနယ် သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ထုတ် Vol 8,No 48 စာမျက်နှာ ၁၈ တွင် ဘဝနွံထဲက အကြွေပန်း လေးများ ဟုဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင...
ပြည့်တန်ဆာများ တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး NLD အမတ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း ကြိုးစားမည်
ပြည့်တန်ဆာများကို တရား ဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီး၊ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင် ရွက်သွားမည်ဟု NLD ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်...
ဒီလို Chatting မျိုးကအနောက်တိုင်း မှာအင်မတန်ရေပန်းစားပါတယ်။ အနောက်တိုင်းရယ်လို့တောင် မဟုတ်ပဲ ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ ဖ...
ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး Sexy ပုံရိုက်တဲ့ မော်ဒယ် အပျော်ရိုက်သော်လည်း ထောင်ဒဏ် ၉ လ
အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်မော်ဒယ် Wang Xiaomeng ဟာ ရဲယူနီဖောင်း ၀တ်ဆင်ပြီး Sexy ပုံလေး များ ရိုက်ကာ သူမရဲ့ Weibo account မှာ ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း လူကုန်ကူး ခံရပြီး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ နှစ်ရာ နီးပါးရှိခဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ပြည်တွင်းကနေ ပြည်ပနိုင်ငံ တွေကို လူကုန်ကူး ခံရပြီး ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသူ ဦးရေ နှစ်ရ...
လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆန္ဒပြတဲ့ သံဃာတွေကို ဖြိုခွဲရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မီးခိုးဗုံးထုတ်တဲ့ ကပစ စက်ရုံရှိရာ နေပြည်တော...
ဂျရတ်ဘေးလ် ရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ တိုးတက်လာအုံးမှာပါ – ရိုင်ယန်ဂစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း၏ တောင်ပံ ကစားသမားကြီး ရိုင်ယန်ဂစ် က တနိုင်ငံတည်းသား ဖြစ်သူ စပါး အသင်းမှ တောင်ပံ ကစားသမား ဂျရတ် ဘေးလ် သည် အန...
.သီတာထွေး”သို့ (ကဗျာ) မြန်မာပြည်သူများအမှတ်ရစေလိုရန်
အနောက်ဖက် ပင်လယ်မှ မီးတောက်များ (ရခိုင်ရေးခင်း)
ဆယ်စု ၂၄ ခါ မပြည့်စီချင်ပါ
၂၂၈ နှစ်ပြည့် ရခိုင့်ဘုရင်နိုင်ငံကျဆုံးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရာသို့
၃၈-နှစ်မြောက် ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ စစ်တွေ၊ တောင်ကုတ်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် မောင်တောတွင် ကျင်းပ
ရသေ့တောင် ရခိုင်ဒေသ လူထု အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် များ
<ဘာသာစုံ ၉ မျိုးကိုတက်ကျွမ်း နားလည်းတဲ့ လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
ကျွန်တော်ထံသို့ စကား ပြောလိုခဲသော
အရမ်းမြန်တဲ့ browserပါ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
ဖုန်းတွေမှာ youtube မှ video, mp3 ဒေါင်းလိုက်ဆွဲမရသူများအတွက် ဒေါင်းသွားရန်
ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်နေပြီ
ရှက်တတ်လျှင် လဲသေဖို့ကောင်းသော လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်
သြစတေးလျဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂျေးလတ်ရဲ့ သမိုင်းတင်သည့် ရဲရင့်ပြတ်သားသောမိန့် ခွန်း"
နိုင်ငံ တကာက လက်ခံ ထားသော အိမ်ထောင်မှုသုခ မြင့်တက်စေမည့် အလွယ်နည်းများ
ဆောင်းဦးရာသီမှ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ သတင်းဝါသနာပါသူဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာအစရှိသည့် ဘလော့ကို pos ကောင်းကောင်း(publish) ပိုင်နိုင်စွာတင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ် ၀ါသနာပါသူများကို ဆောင်းဦးရာသီ ဘလော့မှ အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
ဒီနေ့နိုင်ငံအလိုက် ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် ၁၈. ၁.၂၀၁၃ မှ
google+ မှကြည့်လိုသူများ ဒီမှာအပ်လုပ်ပါ
တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းသာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဟု သမ္မ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချဉ်းကပ်မှု အမေရိကန် အချိန်ယူသင့်...
ဧရာဝတီမြစ် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဘက်စုံ ဖွံြ့...
နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ကုလားတန် မြစ် စီမံကိန်...
မြန်မာ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မောင် လေယာဉ်မယ်များ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်...
လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှု အခွင့်အရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း
အနိမ့် ဆုံး လုပ်ခ လစာ ၉ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ရေး အိုဘားမား...
ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် အင်းစိန်ထောင်သွားရော...
ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က သုတေသနအဖွဲ့ စစ်ေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာကို " ကမ္ဘာ့အသီးသီးက ဘာလို့ လက်ခံကြတာလဲ
အိန္ဒိယ အဂတိလိုက်စားမှုကို အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြပြီး၊ အကျဥ...
၅.၅ လက်မ မျက်နှာပြင်ဖြင့် LG Optimus G Pro
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဖျန်ဖြေပေးဖိ...
ကင်တာနား မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့်...
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ မွတ်စလင်များကို ခရီးသွားခွင့်ပ...
သမ္မတအိုဘားမား မြန်မာ့အရေး မျက်ခြေမပြတ်ကြောင်း ပြော...
ချစ်သူများနေ့တွင် လိင်ပညာပေးနှင့် တန်ဖိုးထားရမည့် ...
ရုရှားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း ...
လိုအင်ဆန္ဒတလုံးတ၀ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆောင်းဦးရာသီမှဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။. Powered by Blogger.